मोडेल वाच Archives - Pathibhara Channel
आलियाको ‘सडक २’लाई खराब प्रतिक्रिया
मेरो पहिलो फिल्मको पारिश्रमिक १५ हजारः स्वस्तिमा खडका
जानिराखौ ! के पुरूषमा जस्तै महिलाको पनि स्व’प्न स्ख’लन हुन्छ
पुरुषको किशोरावस्थामा शारीरिक तथा मा’नसिक परिवर्तन आएझैं किशोरीहरुको पनि शारीरिक तथा मान’सिक परिवर्तन हुनु स्वाभाविकै हो। किशोरावस्थामा प्रवेश गरेसँगै महिलामा यौ’नको विषयमा कौ’तुहलता हुनु स्वाभाविकै हो। आफ्नो यौ’नाङ्गको वृद्धि–विकासले किशोरी आफैँलाई लज्जि’त बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा हार्मोनको उतारचढावका कारण व्यक्तिको बानीव्यवहारमा समेत परिवर्तन आउँछ। किशोरी अवस्था सुरु भएसँगै स्त’नका आ’कार...
यौन सम्र्पक महिला र पुरुष दुवैको सहमतिमा हुन्छ । तर महिलाको यौन सन्तुष्टिका बारेमा पुरुषहरुले त्यति ध्यान पुर्याएको पाइदैन । यसले यौंन जीवनमा तनाव सृजना गरेको पाइन्छ । त्यसैले महिलाको सन्तुष्टि प्रति पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । आफूलाई मनपर्ने आसनलाई छोडेर महिला पुरुषले भनेकै आसनमा सेक्स गर्न बाध्य...
सलिनमानलाई ‘उत्कृष्ट नायक’ को अवाड
नायक सलिनमान बनियाँको आज जन्मदिन हो । सलिन आज आफ्नो जन्म दिन घरपरिवार र साथीभाइसँग सेलिव्रेशन गरिरहेका छन् । सलिनमान बनियाँले चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’ बाट चलचित्र क्षेत्रमा पाइला राखेका थिए । जन्मदिनको अघिल्लो दिन उनका लागि नयाँ खुशी पनि मिलेको छ । काठमाण्डौमा आयोजना भएको ‘डी सिने...
पल शाह र एलिशा राई म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्ने क्रममा
गायिका सुनिता थेगिम र गायक आशा हाङ आङबो म्युजिक भिडियो सुटिङको क्रममा
‘रोज’को विशेष शोमा प्रदिपका यस्ता यूवती फ्यान
किन बन्द भए भद्रगोलसहित एनटिभीका सबै सिरियल ?
नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक रात ८ बजेको समाचारपछि प्रशारण हुने गरेका मनोरञ्जनात्मक टेलिसिरियलहरु केही हप्तादेखि दर्शकले हेर्न पाएका छैनन् । कार्यक्रम उत्पादक मिडिया हबको नेपाल टेलिभिजनसँग सम्झौता अवधि सकिएकाले ती सबै सिरियल बन्द भएका हुन् । मिडिया हबले हास्य टेलिश्रृंखला भद्रगोल (शुक्रबार), जिरे खुर्सानी (बिहिबार) मेरी बास्सै (मंगलबार) र ब्रेक...
राज चाम्लिङ दारा निर्देशित नेपाली चलचित्र गल्ति
राज चाम्लिङ दारा निर्देशित चलचित्र गल्ति